N'okwu a SEO, e nwere ụkpụrụ ndị bụ isi nke ọrụ nchịkọta data ntanetịime ndị a - routeros mstp. Ị ga-enwe ike ịmụta ụzọ ududo na-emepụta usoro nkwụsị iji chekwaa data weebụ na usoro nhazi maka nchịkọta data nchịkọta weebụ. Anyị ga-atụle ihe nchọgharị weebụ nke BrickSet. Ngalaba a bụ ebe nrụọrụ weebụ dabere na mpaghara nke nwere ọtụtụ ozi banyere LEGO. Ị ga-enwe ike ịmepụta ngwá ọrụ mgbapụta Python nke nwere ike ịga na ebe nrụọrụ weebụ BrickSet ma chekwaa ozi dị ka data data na ihuenyo gị. Ihe ntanetị weebụ a nwere ike ịgbasa ma nwee ike itinye mgbanwe mgbanwe n'ọdịnihu n'ọrụ ya.